Andian-dahatsoratra Forum Gastronomy ao Jamaika hampiroborobo ny fitomboan'ny fizahantany
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Jamaika » Andian-dahatsoratra Forum Gastronomy ao Jamaika hampiroborobo ny fitomboan'ny fizahantany
Sehatra fivarotan-toaka any Jamaika
Fizahan-tany any Jamaika Minisitra, Hon. Edmund Bartlett, dia nanoritsoritra fa ny fandraisana andraikitra farany nataon'ny Tahirin'ny Fampiroboroboana ny fizahan-tany (TEF), amin'ny alàlan'ny fizarana fizahan-tany fizahan-tany fizahan-tany, hikarakara andiam-pivalanana forum momba ny gastronomika ao Jamaika, dia hanampy amin'ny fanomanana ny indostrian'ny fandrahoan-tsakafo amin'ny famerenan'ny sehatry ny fizahantany, ny vokatry ny areti-mifindra COVID-19.
Nankasitraka ity fandraisana andraikitra ity ny minisitra Bartlett rehefa niresaka tamin'ny fivoriana voalohany tao anatin'ilay andiany nandrasana fatratra izy tato ho ato. Nifantoka tamin'ny lohahevitra ny forum: ny fizahantany Gastronomy ao anatin'ny New Normal of Living with COVID-19.
Ny andiana forum dia hifantoka amin'ny lohahevitra mifandraika amin'ny sakafo ary mikasa ny hanome vaovao sarobidy amin'ny mpihaino kendrena, izay ahitana: chef, mpikarakara sakafo, akademia, mpandray anjara amin'ny fambolena, restaurateurs ary mpandraharaha fizahan-tany, miaraka amin'ny tanjona hampifandray ny tontolo iainana sy ny fampifandraisana ireo fanombohana ary orinasa efa misy eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany amin'ny gastrolojia.
"Ny fampisehoana sy ny fampahalalana atolotra anao ireo mpiray antoka sarobidy aminay, dia nofonosina am-pitandremana mba hanomanana antsika rehetra ho amin'ny làlana ho any. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, tsy ho raharaham-barotra toy ny mahazatra izany ary na dia betsaka aza ny firaketana an-tsoratry ny fanoloran-tena mandray vahiny, dia tsy maintsy hanao tsara kokoa ny tsirairay, "hoy i Bartlett.
Ny fotoam-pivoriana ho avy amin'ity andiany ity dia hatao amin'ny 9 martsa, mifantoka amin'ny: Fanavaozana amin'ny Gastronomie - Jery todika amin'ny orinasa Gastronomy manavao manerana an'i Jamaika; 16 martsa, momba ny lohahevitra: Manaova ny talenta - Ahoana ny fomba hisarihana sy hitazomana ny talenta marina; 19 martsa, nizaha ny lohahevitra: Media Sosialy sy Marketing nomerika; ary ny 23 martsa, nandinika ny olana: Miala amin'ny vahoaka: mamolavola traikefa fisakafoanana any amin'ny toerana misy anao.
“Tsy isalasalako fa be ny tombotsoan'ny mpandray anjara mandritra ny herinandro vitsivitsy amin'ity andiany ity. Noho izany, ao anatin'ny fivoriana dimy voafintina mafy, hahazo loharanom-baovao amin'ny ambaratonga avo indrindra ianao mba hamelombelona ny sain'ireo izay efa mahalala sy hanokatra fisainana vaovao ho an'ireo izay tsy nahalala », hoy ny minisitra Bartlett.
Ny mpikaroka ao amin'ny forum voalohany dia nahitana ny minisitry ny fambolena sy ny jono, Hon. Floyd Green, talen'ny fizahan-tany, Donovan White ary manamboninahitra ao amin'ny Departemantan'ny fitsikilovana fizahan-tany sy fifaninanana ao amin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Michel Julian. Ny mpandrindra ny fivoriana dia ny Lehiben'ny tamba-jotra Gastronomy, Nicola Madden-Greig.
Ity andiany forum ity, izay halefa mivantana amin'ny pejin'ny media sosialy ao amin'ny TEF, dia iray monja amin'ireo fandraisana andraikitra apetraky ny Minisiteran'ny fizahantany sy ireo masoivohony, hampiasa ny fidinana ateraky ny areti-mandringana hanatsarana, hanovana ary hamerenana ny sehatra iray hiantohana ny famerenany sy ny fahombiazany farany amin'ny vanim-potoana taorian'ny COVID-19. Nofaritana ihany koa fa ireo olona tsy mahita ny seho mivantana dia afaka miditra amin'ny horonantsary fandraisam-peo misy ny fifanakalozan-kevitra, izay azo alaina ao amin'ny kaonty YouTube sy Facebook an'i @tefjamaica.
Ny minisitra Bartlett dia nanamarika fa ny fizahan-tany ara-tsakafo dia ho andry kritika amin'ny fanatarana ny indostria satria mikasa ny hiverina izy. “Ny tanjak'ity orinasa ity dia mbola manodidina ny sakafo. Raha ny marina, ny 42% -n'ny fandaniam-bolan'ny mpitsidika iraisam-pirenena dia amin'ny sakafo. Noho izany, ndao halamina tsara izany ary hamboarintsika ny fahafahantsika mamaly an'io fitakiana lehibe io ary raha manao izany isika dia avelao ny lafiny mahafinaritra indrindra amin'ny traikefa ananan'ny mpitsidika - ny fahaizan'ny mpihinana sakafo, "hoy i Bartlett.